coronavirus (lockdown) အစီအမံများကိုမည်သို့ကိုင်တွယ်ရမည်နည်း။ လက်တွေ့ကျသောအကြံပြုချက်များ။ Martin Vrijland
အတွက် Filed NEWS ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း	by မာတင် Vrijland	မတ်လ 18 2020 အပေါ်	• 18 မှတ်ချက်
လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်သည် coronavirus ဖြစ်ပွားခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည့်မေးခွန်းများနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်။ ငါဘာလုပ်သင့်သလဲ တိုင်းတာမှုများအားလုံးကိုကျွန်ုပ်မည်သို့ကိုင်တွယ်ရမည်နည်း။ အရာအားလုံးလာရန်အဘယ်ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်သနည်း။ ငါအပြုသဘောသတင်းရှိသည်။ အပြုသဘောဆောင်သည့်သတင်းမှာလူများသည်၎င်းတို့အားအစုလိုက်အပြုံလိုက်ခြိမ်းခြောက်မှုများနှင့်ကစားနေသည်ကိုလူများပိုမိုနားလည်လာသည်မှာရှင်းနေပါသည်။ ငါ့စာအုပ်ထဲမှာဒါကိုငါခေါ်တယ် 'ကျွန်တော်တို့ကိုမှားယွင်းသောအဖြစ်မှန်၌စောင့်ရှောက်သောကြီးစွာသောဗိုင်းရပ်စ်ပိုး'' ။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ဗိုင်းရပ်စ်ဖြစ်ပွားမှုကိုအပြည့်အဝအဆင့်တင်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးထင်တယ်၊ အဖြစ်အပျက် 201 coronavirus လေ့ကျင့်ခန်း တရားဝင်စမ်းသပ်ခြင်းမပြုမီ covid-19 ဖြစ်ပွားမှုကိုလှပသောကမ္ဘာမြေပုံများတွင်ပြပြီးဖြစ်သည်။ ဒါဟာအတုသေဆုံးမှုသို့မဟုတ်အတုရောဂါကူးစက်ရန်မဖြစ်နိုင်ပုံရသည်။ ဒါမှမဟုတ်ဖြစ်နိုင်လား အဲလိုဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့ငရဲသူတို့အဲဒီလိုလုပ်ရတာလဲ။
ဒီတော့ဗိုင်းရပ်စ်တကယ်ရှိနေတယ်ဆိုပါစို့။ ၎င်းသည်သဘာဝအားဖြင့်လောသို့မဟုတ်ဓာတ်ခွဲခန်းတွင်ဒီဇိုင်းဆွဲထားခြင်းရှိမရှိ၊ မတော်တဆထွက်ပြေးသွားခြင်းသို့မဟုတ်ဇီဝလက်နက်အဖြစ်ပျံ့နှံ့ခြင်းရှိမရှိကျွန်ုပ်တို့မသိသေးပါ။ ဇီဝလက်နက် (အတွေးစမ်းသပ်မှုအတွက်သာဖြစ်သည်) ကိုရွေးချယ်ကြပါစို့။ အကယ်၍ အစိုးရသို့မဟုတ်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရှိခဲ့လျှင်၎င်းကိုပြန်ရှာမတွေ့နိုင်သောကြောင့်သင်မည်သည့်အခါကမျှရှာဖွေတွေ့ရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ငါတို့သိသည်မှာဘီလ်ဂိတ်စ်သည်လာမည့်ကူးစက်ရောဂါသည်ကွန်ပျူတာဖန်သားပြင်မှလာနိုင်သည်ဟု ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင်ပြောကြားခဲ့သည် ဒီမှာ).
ကျနော်တို့မယုံနိုင်လောက်အောင်သေးငယ်တဲ့ရောဂါကူးစက်မှုအရေအတွက် (သန်းပေါင်းများစွာသောရာပေါင်းများစွာထဲကတထောင်အနည်းငယ်သာ) ကိုမြင်ပေမယ့်ပြောဆိုချက်ကိုရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာတွင် coronavirus နောက်ကွယ်မှအဆတိုးတက်မှုနှုန်းနှင့်အစအစမှာရောဂါကူးစက်မှုအရေအတွက်နည်းနေသော်လည်းကြောင်းဖွင့် မထိန်းချုပ်နိုင်ဖြစ်လာသည်။ အကယ်၍ ၎င်းကိုအမြဲတစေခေါ်ဆိုပါကလူ ဦး ရေ၏ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းသည်ရောဂါပိုးကူးစက်ခံရမည်ဖြစ်သောထိန်းချုပ်ထားသည့်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုကိုဒတ်ခ်ျမှချဉ်းကပ်မှုတစ်ခုသည်ကိုယ်ခံစွမ်းအားဖိုင်းယားဝေါ (လ်) ကာကွယ်ရန်အတွက်အနည်းငယ်ထူးဆန်းသည်။ မာ့ခ်ရပ်တ်ကထိုအုပ်စု၏ကိုယ်ခံစွမ်းအားကိုခေါ်ခဲ့သည်။
ဒါကြောင့်တစ်ချိန်ချိန်သင်သိသောအရာသည်မထိန်းချုပ်နိုင်သောပေါက်ကွဲမှုသို့ရောက်ရှိခြင်းသည်သင့်အားဗိုင်းရပ်စ်ပျံ့နှံ့မှုကိုနှောင့်နှေးစေနိုင်ပြီးထပ်ကိန်းအချက်ကိုမရရှိစေခြင်းဖြစ်သည်။ သူတို့ကဤနည်းလမ်းကိုယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်လည်းအသုံးပြုသည်။ အခြားနိုင်ငံများကမူပိတ်ဆို့ထားခြင်းခံရသည်။ ဤတစ်သမတ်တည်းမဟုတ်သောချဉ်းကပ်မှုသည်မကြာမီကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအတိုင်းမသိချဉ်းကပ်မှုနှင့်အတူပေါ်ထွက်လာရန်အကြောင်းပြချက်ဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟုထင်ရသည် ရာသီဥတုအခြေအနေများနှင့်စပ်လျဉ်း။ ကမ္ဘာ့အစိုးရမှတောင်းဆိုမှုများကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ပြီးဖြစ်သည်။
ငါ့စာအုပ်ကိုဖတ်တဲ့သူကမင်းမှာနိုင်ငံရေးနဲ့မီဒီယာတွေကမင်းရဲ့အိတ်ထဲမှာရှိနေတာ၊ ပြီးတော့သင့်မှာကွန်ယက်ကြီးကြီးတစ်ခုရှိနေပြီဆိုတာကိုသိလိမ့်မယ် ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင် (သင့်အား ၀ င်ငွေအာမခံချက်ပေးသော) ၎င်းကိုအဆင့်ဆင့်တင်ခြင်းကအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ယခင် GDR တွင်တရားဝင်ကိန်းဂဏန်းများအရလူ ၅၀ တွင် ၁ ဦး မှာထိုသို့ဖြစ်ခဲ့သည် Inoffizielle Mitarbeiter ။ အစိုးရများသည်မီဒီယာများနှင့် ၀ င်ငွေပိုရသည့်လူများနှင့် ပေါင်းစပ်၍ ဝါဒဖြန့်ချိရေးနည်းစနစ်များကို အသုံးပြု၍ အရာရာကိုဖြိုဖျက်နိုင်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မတတ်နိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ကောက်ချက်ချနိုင်သည်မှာအစိုးရများသည်ဤအကျပ်အတည်းကိုလိုအပ်သည်ဟူသောအချက်ဖြစ်သည်။
ရောက်ခါနီးပြီ။ ဒီအကျပ်အတည်းမဖြစ်ပွားခင်ကြာမြင့်စွာကတည်းကကျွန်တော်ရေးခဲ့တယ် ဤဆောင်းပါးတွင် ငါအရင်းရှင်စနစ်ဟာကွန်မြူနစ်ဝါဒကို ဦး တည်တဲ့လမ်းပြမြေပုံဖြစ်တယ်လို့ငါပြောခဲ့တယ်။ အကြောင်းမှာဗဟိုဘဏ်များသည်အလွန်ကြီးမားသည့်ငွေတောင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သဖြင့်ကြွေးမြီများ (“ အရာအားလုံးပူဖောင်း”) သည်ရေရှည်မတည်မြဲနိုင်သည့်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ထိုပုံနှိပ်ထားသောငွေဖြင့်ငွေကိုအတိုးမဲ့လွတ်လပ်သောနိုင်ငံစုံကုမ္ပဏီများသို့အတိုးလုံးဝနီးပါးချေးငှားသည်။ နောက်ပိုင်းတွင်ဗဟိုဘဏ်များသည်ထိုကြွေးမြီအာမခံ (bonds) များကိုပြန်လည်ဝယ်ယူခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်ကြီးမားသောကုမ္ပဏီများသည်ပြိုင်ဘက်များကျဆင်းခြင်းကို ၀ ယ်ရန်နှင့်၎င်းတို့၏ရှယ်ယာစျေးနှုန်းများကိုမြှင့်တင်ရန်ကြီးမားသောငွေအမြောက်အမြားပေးခဲ့သည်။
စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်းများသည်အများအားဖြင့်မြင့်မားနေဆဲဖြစ်ပြီးစီးပွားရေးအရကောင်းနေပုံရသည်။ ပို၍ အရေးကြီးသည်မှာသို့သော်ကုမ္ပဏီများသည်ပိုမိုကြီးမား။ ကြီးထွားလာနိုင်ပြီး၊ အထူးအခွင့်အရေးမရှိသောကုမ္ပဏီများမှာပြိုလဲသွားကြသည် (အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သူတို့သည်အခမဲ့ငွေကြေးမရခဲ့သောကြောင့်) ။ စီးပွားရေးကိုပျက်ပြားစေခြင်းအားဖြင့်အစိုးရများသည်ယခုအခါထိုကုမ္ပဏီများကို ၀ ယ်ယူပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ဒါဆိုမကြာခင်ငါတို့ကွန်မြူနစ်ဝါဒလို့ခေါ်တယ်။
ကွန်မြူနစ်အစိုးရလက်အောက်မှာမင်းလိုချင်တာကလွတ်လပ်တဲ့စီးပွားရေးသမားပါ။ လူတိုင်းကိုအခြေခံ ၀ င်ငွေရှိစေရန်နှင့်ပြဌာန်းထားသောပြည်နယ်စည်းမျဉ်းများနှင့်ကိုက်ညီအောင်ကခုန်ပါ။ မကြာသေးမီရက်များအတွင်းဒတ်ခ်ျနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ (ဥပမာအနေနှင့်) အောင်မြင်မှုတစ်ခုအတွင်းအဘယ်အရာအောင်မြင်ခဲ့သနည်း။ လူတိုင်းသည်အိမ်တွင်ရှိပြီးပြည်နယ်၏ပံ့ပိုးမှုအပေါ်အပြည့်အ ၀ မှီခိုကြသည်။ လူတိုင်းကိုအခြေခံ ၀ င်ငွေရရှိစေရန်သောင်းနှင့်ချီသောသန်းထောင်ချီ။ ရနိုင်သည်။ ကွန်မြူနစ်ဝါဒကိုသင်စဉ်းစားပါသလား။ ၎င်းသည်ကွန်မြူနစ်ဝါဒ၏အပြုသဘောဆောင်ဘက်တွင်ရှိသည်။ ကွန်မြူနစ်စိတ်ကူးသည်သီအိုရီအရအလွန်လှပသည်။
coronavirus ဖြစ်ပွားမှုကြောင့်ပြည်နယ်သည်ကွန်မြူနစ်ဝါဒ၏အသွင်သဏ္allာန်အားလုံးကိုရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းနားလည်နိုင်သည်။ အဲဒါအနံ့အရသာခံတာလား။
ငါသိတယ် ကျွန်ုပ်တို့၏ချစ်လှစွာသောဒတ်ခ်ျဝန်ကြီးများနှင့်အမြဲတမ်းရွှင်လန်းဖွယ်ကောင်းသောမာ့ခ်ရပ်တ်တို့သည်ထိုကဲ့သို့သောဆိုးရွားလှသည့်အစီအစဉ်ကိုဘယ်တော့မှလုပ်ဆောင်လိမ့်မည်မဟုတ်ဟုသင်ထင်လိမ့်မည်။ ကောင်းပြီ၊ ထိုကဲ့သို့သောအာဏာရှင်စနစ်အတွက်ကြိုးပမ်းနေသည့်မာစတာ၏ဇာတ်ညွှန်းကိုကျွန်ုပ်မည်သို့ပြောနိုင်ပါသနည်း။ ငါဘယ်လိုမှန်ကန်သောဟောကိန်းထုတ်ခဲ့တာလဲ
ကွန်မြူနစ်ဝါဒရဲ့အမှောင်ထုကိုလည်းငါတို့သိတယ်။ ၎င်းကိုဆိုဗီယက်ယူနီယံဟောင်း၊ GDR၊ တရုတ်နှင့်မြောက်ကိုရီးယားတို့မှသိသည်။ ယခု coronavirus ဖြစ်ပွားစဉ်အတွင်းမှောင်မိုက်သောမျက်နှာကိုယခုသင်တွေ့ပြီဟုသင်သိပါသလား။ ဥရောပနိုင်ငံအတော်များများနှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိလူများအပေါ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရသည်။ ငါတို့ကိုလုံးဝပိတ်ထားလိုက်ပြီ။ နယ်သာလန်မှာမရှိသေးဘူး၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့နယ်သာလန်နဲ့ယူကေကသူတို့ရဲ့ချဉ်းကပ်နည်းကမကောင်းဘူးဆိုတာပြရမယ်။ လက်တွေ့တွင်၎င်းသည်နယ်သာလန်နှင့်ယူကေတွင်စုစုပေါင်းပိတ်ဆို့ခြင်းသည်ပြင်သစ်နှင့်စပိန်တို့ထက် ပိုမို၍ ခက်ခဲလိမ့်မည်ဟုဆိုလိုသည်။ ကွန်မြူနစ်ဝါဒ၏မှောင်မိုက်နေသောမျက်နှာကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ရမည်ဖြစ်ပြီး၎င်းဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကိုသင်ယုံကြည်လာပြီဖြစ်သောကြောင့်၎င်းကိုသင့်အားလိုအပ်သည့်အရာအဖြစ်ရောင်းစားသည်။
ငါ့စာအုပ်ထဲကဗိုင်းရပ်စ်အစစ်အမှန်ကိုငါပြောတယ် 'ကျွန်တော်တို့ကိုမှားယွင်းသောအဖြစ်မှန်၌စောင့်ရှောက်သောကြီးစွာသောဗိုင်းရပ်စ်ပိုး" ငါသည်လည်းအခြားကူးစက်ရောဂါရှိလိမ့်မည်ဟုထိုစာအုပ်ထဲတွင်ဟောကိန်းထုတ်ခဲ့သည်။ ဗိုင်းရပ်စ်အစစ်အမှန်သည်မီဒီယာနှင့်နိုင်ငံရေးအားဖြင့်ထုထည်ကိုခြယ်လှယ်ခြင်းဖြစ်သည်။
“ လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်ညွှန်ကြားချက်များ” ကိုလိုက်နာရန်တာဝန် (အမိန့်များကိုလိုက်နာပါ)
In ဤဆောင်းပါးတွင် ငါနောက်ခံသတင်းအချက်အလက်နှင့်ထိုကဲ့သို့သောအစီအမံများ၏အကျိုးဆက်များကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ ယခင်ဆိုဗီယက်ယူနီယံ၊ GDR၊ မြောက်ကိုရီးယားနှင့်တရုတ်နိုင်ငံတို့ရှိကွန်မြူနစ်ဝါဒမှကျွန်ုပ်တို့သိသောအရာအချို့ကိုသင်အသိအမှတ်ပြုပါသလား။ ဒီတစ်ကြိမ်မှာတော့အရိုးတစ်ခုကပိုဆိုးတယ်။ ငါက "ပညာရှင်ကွန်မြူနစ်ဝါဒ" လို့ခေါ်တယ် ၎င်းသည်နည်းပညာသည်အလွန်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ plays မှပါ ၀ င်သောကွန်မြူနစ်ဝါဒဖြစ်ပြီးပြည်နယ်၏ဗဟိုဆာဗာများမှအရာရာတိုင်းကိုစောင့်ကြည့်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်တရုတ်နိုင်ငံမှကျွန်ုပ်တို့သိရှိထားပြီးဖြစ်သည်နှင့် coronavirus ဖောင်းပွမှုမှတစ်ဆင့်ဥရောပနှင့်အမေရိကန်တို့တွင်အရှိန်မြှင့်လျက်ရှိသည်။
သင်မပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲ။ ထိုအခါသင်သည်သော့ခတ်ခံရလိမ့်မယ်ကြောင့်သင်ရုံအပေါ်အတင်းအကျပ်လိမ့်မည်။ ဒီမဖြစ်မနေ“ စောင့်ရှောက်မှု” ဖြစ်နိုင်ဖို့အတွက်အားလုံးသောဥပဒေများသည်မကြာသေးမီနှစ်များကစတင်ကျင့်သုံးခဲ့သည်။ မသင်မနေရစိတ်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ရပ်ကို ၂၀၂၀ ဇန်နဝါရီ ၁ ရက်တွင်စတင်ခဲ့သည်။ ငါနှစ်ပေါင်းများစွာဤအကြောင်းကိုသတိပေးခဲ့သည်ထက်ပို 1 လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သောအသနားခံစာလုပ်ခဲ့တယ်။ အကျိုးမရှိ လက်ရှိ Rutte အစိုးရအဖွဲ့လက်အောက်တွင်ဥပဒေကိုအလျင်အမြန်ပြဌာန်းခဲ့သည်။
သင်ဘာလုပ်နိုင်သေးလဲ။ အဲဒါကိုမင်းကိုဖြတ်ကျော်သွားပြီးအဲ့ဒီ့နောက်မှာပိုပြီးပျော်စရာကောင်းလာမယ်လို့မျှော်လင့်ပြီး၊ ဒီနည်းပညာရှင်ကွန်မြူနစ်အစိုးရလက်အောက်မှာပဲနေတာကပိုကောင်းမလား။ နောက်ဆုံးတော့ငါတို့စီစဉ်ထားတဲ့အရာအားလုံးကိုကြိုက်တယ်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အခြေခံ ၀ င်ငွေရလိုသည်။ လာမယ့်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာအလုပ်မလုပ်ရတာလည်းကောင်းပါတယ်။
အာဏာရှင်အစိုးရများကစုစုပေါင်းဖိနှိပ်မှုကို ဦး တည်စေကြောင်းသမိုင်းကသင်ကြားပေးခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်မေးခွန်းကသင်အဆင်ပြေချောမွေ့ခြင်း၊ ရေတိုအတွက်ကွေးခြင်းလားရေရှည်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုစဉ်းစားခြင်းလားဆိုတာပါ။
ငါ့စာအုပ်ထဲမှာ 'master script' ဆိုတာဘာလဲကိုအတိအကျရှင်းပြခဲ့တယ်။ ထို“ master script” ကိုလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကဟောကိန်းထုတ်ခဲ့ပြီးအရာအားလုံးထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။ သင်ရွေးချယ်သင့်သည့်အရေးကြီးသောရွေးချယ်မှုများ (လက်တွေ့ကျသောအကြံပြုချက်များ) ကိုလည်းပြသပါမည်။ ဂိမ်းတစ်ခုလုံးကို A မှ Z သို့သာကြည့်လျှင်အရေးကြီးဆုံးရွေးချယ်မှုကိုလုပ်နိုင်သည်။ ငါဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်တွင်ထည့်သွင်း။ မရပါ၊ သို့သော်စာမျက်နှာ ၁၃၄ ခုဖြင့်ထားပါ။ မကြာခင်မှာပဲအင်္ဂလိပ်ဗားရှင်း။ သင့်ကိုယ်သင်ယူပါ။ ကျွန်ုပ်စာအုပ်သည်သတင်းကောင်းနှင့်လက်တွေ့တွင်အရေးကြီးဆုံးလက်တွေ့ကျသောနိဂုံးချုပ်ဖြင့်အဆုံးသတ်ထားသည်။ သို့သော်၎င်းကိုတစ်ကြောင်းတည်းဖြင့်အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြခြင်းသည်အနှစ်သာရပင်ဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်ဒီစာအုပ်ထဲမှာတစ်ခုတည်းသောလက်တွေ့ကျသောအကြံဥာဏ်များကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ ၁ ရက်အတွင်းသင်ဖတ်နိုင်သည်။ တိုတောင်းပေမယ့်ချိုမြိန် ဒီမှာဖတ်ပါ
သင်၏စာအုပ်ဝယ်ယူမှုနှင့်အတူကျွန်ုပ်သည်လည်းကျွန်ုပ်၏အလုပ်ကိုကျွန်ုပ်ကူညီနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ သင်၏အသင်း ၀ င်ဖြစ်ရန်သင့်အားကျွန်ုပ်ဖိတ်ခေါ်လိုပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သင်၏ထောက်ပံ့မှုသည်အမြဲတမ်းလိုအပ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဆောင်းပါးများကိုဝေမျှရန်လည်းအရေးကြီးသည်၊ သို့မှသာကျွန်ုပ်တို့သည်ဝေဖန်သောလူတန်းစားကိုရောက်ရှိမည်။ သငျသညျဤ anti- ခြောကျခြားဖွစျပွီးဗိုင်းရပ်စ်၏အဆအကျိုးသက်ရောက်မှု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ ခလုတ်ကိုထိလိုက်ရင်သင်၌ပါဝါရှိသည်။
လူမှုမီဒီယာဆွေးနွေးမှု - ပြည်နယ်၏ coronavirus quarantine အစီအမံများကိုလက်ခံရန်ကိရိယာတစ်ခုလား။
Tags:: လမ်းညွှန်, ငွေသား, communisme, ငွေသား, coronavirus, Covid-19, အနာ, အထူးပြုလုပ်ထားသော, geld, ညွှန်ကြားချက်များ, အရင်းရှင်ဝါဒ, ပိတ်ဆို့ရှာဖွေမှုပြီးမှသာ, အစီအမံ, အမှတ်, အစိုးရ, လက်တွေ့ကျတဲ့, Rutte, ပြည်နယ်, ထောက်ပံ့, ထောက်ခံမှု packages များ, te, အကြံပေးချက်များ, Wat
18 မှမတ်လ 2020 14: 19
မတ်လ 10 2020
ဘုရင်မင်းမြတ်ဝီလမ် - အလက်ဇန်းဒါးသည်Kingပြီ ၁၅ ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့နံနက်တွင် 'CONTAMINATED!' ပြပွဲကိုဖွင့်လှစ်သည်။ Leiden အတွက် Rijksmuseum Boerhaave မှာ။ ဒီပြပွဲကကူးစက်ရောဂါတွေဖြစ်တဲ့ပလိပ်နဲ့ကျောက်ရောဂါ၊ သူတို့ဘဝကိုဘယ်လိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့အကြောင်းပါ။
18 မှမတ်လ 2020 15: 32
ဒီတော့ကလေးတွေအတွက် .. အာဏာရှင်စနစ်ကကလေးတွေအတွက်ပါ။
ညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာပါ: Befehl ist befehl!
19 မှမတ်လ 2020 17: 14
အချက် ၁။ ပထမ ဦး ဆုံးနံနက်စာစားပြီးနောက်၊ ရေချိုးပြီးနောက်ညဝတ်အင်္ကျီဝတ်စုံကိုချွတ်ပါ။ ဉာဏ်ရည်ပြည့်ဝနေသောလူငယ်များနှင့်သူတို့၏မိဘများကစာသားအတိုင်းဖျော်ဖြေကြလိမ့်မည်။
18 မှမတ်လ 2020 19: 27
ယခုည ၇ နာရီနောက်ပိုင်းတွင်ဘုရားကျောင်းခေါင်းလောင်းမြည်သံကိုသင်ကြားနိုင်သည်။ ချာ့ချ်များသည်တည်ရှိဆဲဖြစ်သလော၊ ဒီနာရီမှာလား လူတွေကိုကြောက်ရွံ့တဲ့ဖက်ရှင်မှာထားဖို့၊ စောင့်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိသလား။ ငါသွေးခုန်နှုန်းကိုယူပြီးတံခါးအပြင်ကိုထွက်သွားပြီးမင်းသမီးနှစ် ဦး ကိုစကားပြောမယ်၊ ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အနေဖြင့်၊ အခြားအပတ်တိုင်းတွင် Corona ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်ခေါင်းလောင်းများမြည်လာလိမ့်မည်။
သူတို့သည် Psyop trance hypnosis နှင့်အလွန်ဝေးကွာသွားသည်။
ယခုသို့မဟုတ်ဘယ်တော့မှ "illuminati" အတွက်။ ယခုပင်ရပ်တန့်ငါ "illuminati" မှပုံမှန်လုပ်ပါဟုပြောသည်။
18 မှမတ်လ 2020 19: 51
18 မှမတ်လ 2020 20: 04
နိုင်ငံတော်ကိုယ်စားလူမှုရေးမီဒီယာဆွေးနွေးမှုများကိုစောင့်ကြည့်သူများ။ ထို့နောက်သူသည်သူနှင့် ပတ်သက်၍ မကောင်းသောအရာများကိုပြောရန်နှင့်မာတင်ဗရိုင်းလန်အမည်ပေါ်သည့်နေရာတွင်ပြည်နယ်အစီအစဉ်ကိုကာကွယ်ရန်ဆော့ (ဖ်) ဝဲကိုရရှိသည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒါအတွက်သေးသေးလေးကိုသင်ရပါတယ်။ ဒါဖြစ်နိုင်မလား ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီလိုအလုပ်မလုပ်ဘူးလား လက်ျာဘက်? ဒါကနောက်ထပ်ထူးထူးဆန်းဆန်းပူးပေါင်းကြံစည်မှုပါပဲ
18 မှမတ်လ 2020 21: 17
ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောရရင် .. မင်းမင်တော့ဘူး .. မင်းက .. လူကြီးလူကောင်း) ဒီအပေါ်ပြုမူမဟုတ်ပါ ငါဒီမပြုခဲ့ထပ်ခါတလဲလဲ ၀ န်ကြီးများမလိုက်နာသောကြောင့်၎င်းကိုဆောင်ရွက်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ
18 မှမတ်လ 2020 21: 27
18 မှမတ်လ 2020 22: 01
ယနေ့ NOS သတင်း .. "စူပါမားကက်များသည်ငွေသားပေးချေမှုကိုတားဆီးချင်သည်။ "
18 မှမတ်လ 2020 23: 50
၎င်းကိုမမေ့ပါနှင့်၊ စနစ်တွင်ပါ ၀ င်သောအမှန်တကယ်မဲပေးရန်မည်သည့်ပါတီမျှမရှိပါ။
အတိုက်အခံအဖွဲ့သည် Johan Cruiyff နှင့်တိုင်ပင်ပွဲသည်မည်သို့ဟီဟီဟီဟီဟီ၌မည်သို့မည်ပုံကျင်းပမည်ကိုကြာမြင့်စွာတိုင်ပင်ဆွေးနွေးခဲ့ဖူးသည်၊ သူသိထားသော Johan 😉ထို့ကြောင့်သူက "သင်သဘောပေါက်မှသာသင်မြင်လိမ့်မည်"
18 မှမတ်လ 2020 23: 53
The Game သည်ကြီးကျယ်သော Cruyff ၏အကြံအစည်ဖြစ်သည်။
အပြစ်ရှိတယ်၊ ချစ်စရာကောင်းတဲ့လူတွေ Rutte နဲ့ Cruyff တို့၊
19 မှမတ်လ 2020 20: 30
19 မှမတ်လ 2020 00: 25
19 မှမတ်လ 2020 00: 30
ရဲများကနယ်သာလန်နိုင်ငံတွင်လုံးဝပိတ်ဆို့ခြင်း၊ လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးသော့ခတ်ထားခြင်းခံရသည့်အခြေအနေနှင့်လူများသည်အိမ်တွင်နေရန်အခြေအနေအတွက်ပြင်ဆင်နေသည်။ ထိုအခြေအနေမျိုးတွင်ရဲများသည်ထိုကဲ့သို့သောအရေးပေါ်အမိန့်ကိုပြဌာန်းပြီးလိုအပ်ပါက“ အားကြီးသောလက်ရုံးတော်ကိုပြသ” သင့်သည်။
19 မှမတ်လ 2020 08: 34
ကျွန်ုပ်မှန်ကန်စွာနားလည်ပါကလူ ၅၈ ယောက်သေဆုံးခဲ့ပြီးအများစုမှာအသက်ကြီး။ ဖျားနာနေပြီဖြစ်သည်။ ဤအရေအတွက်နည်းပါးသောကြောင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းသည်ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်လျက်ရှိသည်။
ပြည်သူ့အိပ်ရာမှထ အစိုးရ ၀ န်ထမ်းများသည်မင်း၏အထက်အရာရှိ၏အမိန့်ကိုမလိုက်နာမီစဉ်းစားသည်။ မေးခွန်းများမေးပြီးသင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်သင်၏အဆင့်မြင့်မှုကိုဝေဖန်ပါ။
19 မှမတ်လ 2020 17: 19
တစ်နေ့မှာအမှုအသစ် ၂၀၀၀ ရှိမယ်ဆိုရင်ထိတ်လန့်မှုကိုသင်စောင့်ဆိုင်းနိုင်လို့ပါ။ ထိုအခါမီဒီယာရှိထိတ်လန့်မှုများသည်လူတို့အားအလွန်အမင်းကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်နေပြီးလူတိုင်းကထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ကြသည်။ ပြီးတော့နယ်သာလန်မှာရှိတဲ့သော့ခတ်တာကိုစပိန်နဲ့ပြင်သစ်မှာ ၁၀ ကြိမ်လောက်တင်းကျပ်တယ်။ ထိုအခါသင်သည်နယ်သာလန်နိုင်ငံမှမြောက်ကိုရီးယားသို့ထွက်ပြေးရန်ကြိုးစားသည့်အခြေအနေကိုရနိုင်သည်။
19 မှမတ်လ 2020 10: 51
20 မှမတ်လ 2020 00: 46
မာတင်ကမင်းကသူရဲကောင်းပဲ ဗဟုသုတများစွာရှိသောလူတစ်ယောက်။ ကံမကောင်းစွာပဲသိုးများစွာကျန်ရှိနေသေးသည်။ ပြည်သူ့မီဒီယာဆင်ကန်းတောတိုးယုံကြည်ပါတယ်။ ၎င်းသည်“ ခြေသည်း” ဟုခေါ်သောအရာများမှပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်မည်။ မင်းရဲ့သီအိုရီဟာလက်တွေ့ဖြစ်လာမှာကိုငါကြောက်တယ်။ ဒီဟာကိုယောက်ျားလေးဖြစ်ခွင့်မပေးဘူးလား။ ကာကွယ်ဆေးထိုးရန်လိုအပ်သည်။ ငါမစဉ်းစားဘူး !!!!! သင့်ရဲ့စာအုပ်က၎င်း၏လမ်းပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ငါဖတ်ဖို့မစောင့်နိုင်ဘူး (Corona ဟုခေါ်သောဖြစ်ပျက်မှုတစ်ခုလုံးမှ) ခံစားရသည့်ခံစားမှုအနည်းငယ်ကိုယခုချက်ချင်းရယူပါ။
« ၀ န်ကြီး Bijleveld သည်စစ်တပ်တွင်အကန့်အသတ်ရှိသည့်နေရာများနှင့်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီး coronavirus အကျပ်အတည်းအတွင်းအမိန့်ကိုဆက်လက်ထိန်းထားနိုင်သည်။
ဒေါက်တာ၏ Coronavirus ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ဖွယ်ကောင်းသောထိုးထွင်းသိမြင်မှု Wolfgang Wodarg? »